आजको पञ्चाङ्ग एवम् राशिफल (२९ भदौ २०७८ सोमबार, १४ सेप्टेम्बर २०२१) « Nepali Digital Newspaper
२९ भाद्र २०७८, मंगलवार ००:३१
श्रीशाके १९४३ वर्षा ऋतु राक्षसनामक संवत्सर नेपाल सं. ११४१ वि.सं. २०७८ भाद्र २९ गते मंगलबार तद्अनुसार सन् २०२१ सेप्टेम्बर १४ तारिख भाद्र शुक्लपक्ष अष्ठमी तिथि ज्येष्ठा नक्षत्र ९ः४६ पर मूल नक्षत्र प्रिति योग ९ः२५ पर आयुष्मान योग बालव करण आनन्दादिमा मुद्गर योग चन्द्रमा वृश्चिक राशिमा ९ः४६ बजेसम्म त्यसपछि धनु राशिमा भ्रमणशील रहनेछ । काठमाडौंमा सूर्योदय बिहान ५ः४९ मा भयो र सूर्यास्त साँझ १८ः८ मा हुनेछ । भौमाष्टमी व्रत, गोरखकाली पूजा, कायअष्टमी, कागेश्वर मेला, राधाजीको जन्मोत्सव, ल.पु.दशमहाविद्या पूजा, बालदिवस ।
मेष – हरेक प्रकारले पराक्रम बढ्नेछ । विकासको नयाँ संकेत देखापर्ला । बोली र व्यक्तित्वको प्रभाव बढ्नेछ । ऋण रोग र शत्रुसित लड्ने क्षमता बढ्ला । बौद्धिक र रचनात्मक क्षेत्रसित सम्बन्धित कार्यमा पनि सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ । आयमूलक काममा सफलता मिल्नेछ । इष्टमित्रको साथ मिल्नेछ । सुविधा बढ्ला ।
बृष – शुभकाममा प्रवृत्ति बढ्ला । योजना र बजेट बनाइ काम गर्नु उचित होला । उन्नति–पदोन्नति हुनेछ । मान महत्व बढ्ला । शुभ र बौद्धिक काममा सफलता मिल्नेछ । धन सम्पत्ति मान महत्व बढ्ला । ऋण रोग र शत्रुसित लड्ने सामर्थ्य बढ्नेछ । यात्रा होला । यश वर्चश्व वृद्धि होला । अरुको भरमा बस्नु र विवादमा पर्नु उचित हुनेछैन तथापि आफन्तको सहयोग मिल्नेछ ।
मिथुन – जोखिममा नपर्नुहोला । खर्च हुनेछ । रसरागमा आकर्षण बढ्नेछ । धैर्य र विवेकले काम गर्नु बेस होला । स्वास्थ्य र नियमकानुनलाई ध्यानमा राख्नुपर्ला । लापर्वाही नगरी काम गर्नु उचित होला ।
कर्क – अन्नधन बढ्नेछ । सुख समृद्धि वृद्धि हुनेछ । विलासमा रुचि बढ्ला । खेलकुद र भ्रमणमा आकर्षण बढ्ला । मिठो भोजन मिल्नेछ । कार्यगति बढ्नेछ ।
तुला – भागदौड रहला । यात्रा होला । सुख आनन्द बढ्ला । कार्यमा सफलता भैरहनेछ । समस्याको समाधान मिल्नेछ । प्रेममा सफलता प्राप्त होला । सन्तानको साथ मिल्नेछ । भाग्यवर्द्धक काम बन्नेछ । सुख समृद्धि धन यश मान पद प्रतिष्ठा बढ्नेछ । तथापि अरुको भरमा नबसी आफ्नै बलविवेकले काम गर्नु उचित होला । साझेदारीको काम बन्नेछ । शुभ काममा आकर्षण बढ्ला ।
वृश्चिक – यात्रापरक कार्य बन्ला, तर अरुमाथि भर पर्नु उचित हुनेछैन । जोखिममा नपर्नु उचित होला । मिठो भोजन मिल्नेछ । रसरागमा आकर्षण बढ्ला ।
धनु – साहसिक काम बन्नेछ । उत्साह बढ्ला । लेखन प्रकाशन, कला, साहित्य, लेखन आदिसित सम्बन्धित कार्यमा सफल हुनुहुनेछ । खेलकुद भ्रमणमा आकर्षण बढ्ला । ऐश्वर्य वृद्धि होला । आशा उत्साह बढ्ला । भाग्यवर्द्धक र मानमा वृद्धिदायक काम बन्नेछ । साथीभाइको साथ मिल्नेछ । ऐश्वर्य बढ्ला । पराक्रम वृद्धि होला । वार्तामा सफलता मिल्ला । पारिवारिक स्थितिमा सुधार हुनेछ । मान पुरस्कार मिल्नेछ । यात्रामा सफलता मिल्नेछ । भोजभतेरमा भाग लिनु हुनेछ ।
मकर – भाग्य वृद्धि होला । आरोग्यता बढ्ला । धन समृद्धिमा बृद्धि होला । शत्रुलाई जित्ने क्षमता बढ्नेछ । सुख शान्ति मिल्नेछ । मिठो भोजन मिल्नेछ । हांसविलासमा रुचि बढ्ला । मनोकूलको काम बन्नेछ । सभासमारोहमा मान पुरस्कार मिल्नेछ । वार्तामा सफलता प्राप्त होला ।
मीन – खेलकुद र भ्रमणमा रुचि बढ्ला । वार्तामा सफलता पाउनुहुनेछ । रसरागमा रुचि रहला । धन सम्पत्ति बढ्नेछ । मिठो भोजन मिल्ला । सुख शान्ति बढ्नेछ । उन्नति पदोन्नति हुनेछ । राजकाज बन्नेछ ।